Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A January 2011 (3)
Q and A January 2011 (3)
1. ကော်ဖီ သောက်များရင် ကြောင်တတ်လား
2. ဖြစ်နေတာ Hydrocele လို့ ပြောပါတယ်
4. I feel look like asthma
5. အူကျနေတာ ဂ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ
6. ဝှေးစေ့မှာလည်း မကြာခန ယားယံတတ်ပါတယ်
7. သားလေးက အရမ်းသရည်တွေကျနေလို့ 
သမီးက ကော်ဖီအရမ်းကြိုက်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ သမီးက ကော်ဖီ မသောက်ရရင် မနေနိုင်ဘူး။ တစ်ရက်မှာဆို နှစ်ခွက် သောက်ချင်နေတယ်။ ထမင်းစားပြီးတာတောင်မှ ကော်ဖီမသောက်ရရင် နေလို့ မပျော်ဘူး တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲ။ ပြီးတော့ ခေါင်းမူးပြီး အန်ချင်တလိုလိုဖြစ်နေတယ်။ ကော်ဖီသောက်ရင် သွားဝါတာတကယ်ပဲလား။ ပြီးတော့ ကော်ဖီ သောက်များရင် ကြောင်တတ်လား။ သူများက ကြောင်တတ်တယ် ပြောတာကြားရလို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ဖြေပေးပါနော်။
ကော်ဖီ ၂ ခွက်က မများပါ။ ဘယ်အရွယ်ခွက်လဲတော့ မသိဘူးပေါ့။ သူများတွေ နေစာ-ညစာ စားရင် (ဆလတ်) ဖြစ်ဖြစ်၊ (ဆု-ပ်) ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ စတယ်။ ပြီးမှာ ထမင်း-ဟင်းစားတယ်။ နောက် အချိုပွဲလာတယ်။ နောက်ဆုံး (တီး-အော်-ကော်ဖီ) လာတယ်။ ဆိုတော့ သူများတွေနဲ့ အတူဘဲပေါ့။ သွားကို ဝါ-ညိုစေတာက အစား-အသောက်ထဲက ဆိုးဆေး အပေါ် မူတည်ပါမယ်။ ကော်ဖီကြောင့် ကြောင်တတ်တာတော့ ဆေးစာမှာ မတွေ့ဘူးသေးဘူး။ လူပြောများလာရင်တော့ သုတေသန လုပ်ရမှာပေါ့။ သေခြာတာက တခုခုကို စွဲနေသူတွေ စွဲတဲ့ဟာကို မလုပ်ရ-မသောက်ရ-မစားရ-မရှူရရင်တော့ ကြောင်နိုင်တယ်။ Withdrawal symptom ခေါ်တာပေါ့။ ကြောင်တာတင်မကဘူး၊ ကြမ်းမယ်။
ကျွန်တော် ဒီနေ့ ဆေးခန်းကို အလုပ်နားပြီး သွားပြပါတယ်။ အဲဒီဆရာဝန်ကပြောတော့ ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာ Hydrocele လို့ ပြောပါတယ်။ ဘာဆက်လုပ်သင့်ပါသလည်း။ နည်းလမ်းလေး ဘာလေးရှိရင် ပြောပြပါဦး။ ဒီဘက်မှာက ခွဲရစိတ်ရရင် ငွေအရမ်းကုန်လို့ပါ။ ကျွန်တော် ကုမ္ပဏီကလည်း ဆေးခဘာတစ်ခုမှတာဝန်မယူပေးတော့ အခတ်တွေ့နေလို့ပါ။ သေခြာပေါက် ခွဲရရင် ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြီးခွဲခြင်လို့ပါ။ နည်းလမ်းကောင်းရှိရင် ပေးပေးပါဦး။
Hydrocele မုတ်ရောဂါဖြစ်တာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အရေးတကြီးလဲ လုပ်စရာ မလိုပါ။ တချို့ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ-၃ဝ နေကြတယ်။ ကြာလို့ ကြီးလာတာသာ ရှိမယ်။ ပိုမကြီးအောင်လဲ သိပ်လုပ်စရာ မရှိပါ။ အနေအထိုင်-အသွားအလာ ခက်တာသာ ရှိတယ်။ အစစ အဆင်ပြေမှ ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်စရာ မလိုပါ။ မြန်မာပြည်မှာလဲ ဘယ်ဆေးရုံမှာမဆို ခွဲနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က သန်ချဆေးသောက်ချင်လို့ ဘာသန်ရှိလဲဆိုတာ ဝမ်းစစ်ထားတဲ့ဆေးစာရွက်ပါ။ ဘာရေးထားမှန်း မသိလို့ ပြောပြပေးပါအုံး။ ဘယ်လိုသန်ချဆေးသောက်ရမလဲပေါ့။ ပြီးတော့ အခြားဘာရေးထားသေးလဲ။ အခြား ဘဝင်မကျတာ ရှိရင်လဲ ပြောပြပေးပါခင်ဗျ။
ဝမ်းစစ်တာ အကုန်ကောင်းတယ် ပြောနိုင်တယ်။ ဗက်တီးရီးယာလဲမရှိပါ။ Ova ဆိုတာ သန်ဥကိုပြောတာ။ မရှိပါ။
တကယ်လို့ သန်ချဆေးသောက်ချင်ရင် Albendazole, Mebendazole တမျိုးမျိုးကို ညအိပ်ရာဝင်မှာ လူကြီး ၂ ပြား၊ ၂ နှစ်အောက် ၁ ပြား။ အရည်လာရင် ၂ နှစ်အထက် တပုလင်း၊ ၂ နှစ်အောက် တဝက် သောက်ပါ။ ဝမ်းနုတ်ဆေး လိုက်စရာ မလိုပါ။ တချို့သန်ကောင်တွေက ၃ ည ဆက်သောက်စရာ လိုတတ်တယ်။ အများဆုံးက ၁ ညနဲ့ရတယ်။ သန်များသူတွေကို ၁ လ နေရင် တခါထပ်ချရမယ်။ ဥတွေကို သန်ချဆေးက မချတော့ ဥကနေ အကောင် ဖြစ်လာတာတွေကို ချဘို့ ၁ လ အနေ ထပ်သောက်ရတာပါ။
On Wed, Jan 12, 2011 at 10:07 AM
Dear Doctor, I feel look like asthma. So please explain to me fully details about Asthma.
“Asthma ပန်းနာ” ကို ဖတ်ပါ။
ကျွန်တော် အူကျနေတာ ဂ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ခုကျွန်တော် တခြားနိုင်ငံသို့ရောက်နေပါသည်။ အရင်က အူကိုတင်လို့ ရသေးတယ်။ အခု အူကမာပြီး တင်လို့မရဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ အရမ်းလည်း အောင့်နေပါတယ်။ ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ပေးရမည်ကိုပြောပြပေးပါ။
အခုချက်ချင်း အိပ်ယာမှာ လဲနေပါ။ အူကျတဲ့ နေရာပေါ်မှာ ရေခဲတင်ပါ။ ရေခဲကို ပလပ်စတစ်အိတ်မှာ ထည့်ပြီး တင်ပါ။ လိုသေးရင် ကုတင် ခြေရင်းပိုင်းကို မြှင့်ထားပါ။ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နားလိုက်ပါ။ အစာ အမာ မစားနဲ့အုံး။ သွားရည်စာလဲ ဆာလွန်းမှသာ စားပါ။ ၁-၂ နာရီအတွင်း ပြန်ဝင်ရမယ်။ Pain Killer တခုခု၊ ဥပမာ Paracetamol, Ibuprofen တပြား သောက်ပါ။ ကိုယ့်ဖါသာ ပြန်သွင်း ကြည့်ပါ။ ကပ်ပဲ့အိတ်ကနေ အထက်၊ နောက် ဘေးဘက်ဆီ ဦးတည်ပါ။ ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၂-၃ နာရီမှ မဝင်ရင် အရေးပေါ်ခွဲရမယ်။ “Hernia အူကျ-မကျ သိပါရစေ” ကို ဖတ်ပါ။
လိုအပ်သေးရင် ဆရာဝန်က ငြိမ်ဆေး၊ အ်ိပ်ဆေး ထိုးပေးသေးတယ်။ လွယ်ရင်၊ လိုရင် Diazepam ၁ ပြားသောက်ပြီး ကြိုးစားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
8 Jan 11, 19:18
ပေါင်နဲ့ ဝှေးစေ့ ထိတတ်တဲ့နေရာတွေမှာ အမြဲလို ပွန်းပြီး မည်းနေပါသဖြင့် ဘယ်လို ပျောက်ကင်းနိုင်မလည်းခင်မျာ။ ဝှေးစေ့မှာလည်း မကြာခနဆိုသလို ယားယံတတ်ပါတယ်။ အသက် ၂၅ ပြည်ပမှာ နေပါတယ်။
Anti-fungal cream, gal, powder Clotrimazole, Ketoconazole, Econazole တခုခုကို တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းပါ။
မရေသေးရင်၊ ဒါမှမဟုတ် ဆိုးရင် Hydrocortosne 1% cream ကိုပါ တနေ့ ၂ ကြိမ်လိမ်းပါ။ Clotrimazole 1% + hydrocortisone 1% တခါထဲ တွဲထားတဲ့ လိမ်းဆေးလဲ ရှိတယ်။ တကယ်လို့ ကုတ်တာကနေ (ဗက်တီးရီးယား) ပိုးဝင်လာတာမို့ ပိုပြီးနာလာ၊ ရောင်လာ၊ ကိုယ်နဲနဲပူသလိုဖြစ်လာရင် ရှေးဦးသူနာပြုအိတ်မှာပါတဲ့ အနာလိမ်းဆေးမျိုး သုံးနိုင်တယ်။ မရသေးရင် Ampicillin, Septrin စားဆေး ကိုပါ သောက်ရမယ်။ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
Scrotal rash ကပ်ပဲ့အိတ်ယားတာက (ဖန်းဂတ်စ်) ခေါ်တဲ့ Fungus မှို ရောဂါကြောင့်အဖြစ်များတယ်။ Tinea pedis infection ဆိုတာ ခြေထောက်မှာဖြစ်တာကို အားကစားသမားခြေထောက် Athlete’s foot ခေါ်တယ်။ Tines cruris infection ဆိုတာ ပေါင်ခြံမှာ လာဖြစ်ရင် Jock itch လို့ ခေါ်ကြတယ်။ နီရဲ-ယားပြီး အနားသားကနေ အဖတ်လေးတွေ ကွာတယ်။ ပေါင်၊ တင်ပါးတွေဆီပြန့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Penis လိင်တံ နဲ့ Scrotum ကပ်ပဲ့အိတ်ကို မကူးဘူး။
5 Jan 11, 16:17
ကွှန်မရဲ့ သားလေးက အခုဆို ၅ လကျော် ၆ လထဲမှာပါ အရမ်းသရည်တွေကျနေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိလို့ ပါ မြန်မာဆေးလည်း မရှိလို့ ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာလည်း ဆရာအားရင်ဖြေပေးပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။
ဒီအရွယ်မှာ သွားရည်ကျတာက လျှာမှာ မှက္ခရု ဆိုတဲ့ မှိုဝင်တာဖြစ်တတ်တယ်။ လျှာက်ိုကြည့်ရင် အဖြူဖတ်တွေ ကပ်နေတာ တွေ့နိုင်တယ်။ တချို့က ရဲနေမယ်။ နာလိမ့်မယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ သူ့ဖါသူ ပျောက်စေနိုင်တယ်။ အဖြူဖတ်တွေ ရှိနေရင် အဝတ်စ သန့်သန့်လေးကို မိခင်လက်ညှိုးမှာ ပတ်ပြီး အဖြူဖတ်တွေကို ခြစ်ထုတ်ရှင်းပေးပါ။ လိုသေးရင် ဆေးပြာဆိုတဲ့ Gentian Violet ဆေး လိမ်းပေးနိုင်တယ်။ မိခင်နို့တိုက်ရင် နို့သီးထိပ်ကို ခဏခဏဆေးပါ။ နို့ဗူးဆိုလဲ ပိုဆေးပါ။ နာတယ်ထင်ရင် Paracetamol အရည် ဇွန်းသေးတဝက် တိုက်ပါ။ တခြားဆေးတွေမလိုပါ။